Nguva zhinji, kazhinji mushure meKuvandudzwa ku Windows kana kuisirwa kadhi nyowani yemifananidzo, unogona kusakwanisa kugadzirisa Screen Resolution paPC yako ichimhanya paWindows. inogara ichidzokera kuchisarudzo chekare. Zvakatoipisisa, iyo monitor haina kuratidza iyo resolution yemuno. Mune ino posvo, ndiri kutaura nezve maitiro ekugadzirisa dambudziko, kana iwe haigoni kushandura dhizaini screen in Windows 10.
Usati watanga, ngatimboedza mamwe matipi ekutanga. Vhura Zvirongwa kwaunosvika chinja dhizaini. Enda kuZvirongwa> Sisitimu> Ratidza. Iwe unofanirwa kuona inodonhedza pasi pechisarudzo Resolution. Ona kana uchikwanisa kuchinjira kuchisarudzo icho chaunoda kuve chiri nani pane ichi. Dzimwe nguva, nekuda kweimwe nyaya, iwo madhiraivha ekuratidzira inoshandura otomatiki chigadziriso. Kana izvi zvikasagadzirisa dambudziko rako, ngatiedze dzimwe nzira.
Haikwanise kuchinja Screen Kugadzirisa mukati Windows 10
Chikonzero chikuru cheiyi nyaya mutyairi kusanzwisisika. Dzimwe nguva Madhiraivha haawirirane, uye vanosarudza yakaderera resolution kuti vagare vakachengeteka. Saka lets kutanga gadzirisa iyo Graphics driver kana kuti pamwe uchidzosera kuchirungu chakapfuura.
Ongorora: Edza izvi kugadzirisa kana chete yako zvirikuitika.
1] Gadziridza kana Roll Back Graphics Driver:
Vhura Meneja Mudziyo (WIN + X + M)
Wedzera Display Adwords, uye sarudza iyo GPU yakanyorwa ipapo.
Cherekedza pasi iyo OEM, uye Model kwete, uye tora mutyairi wazvino kubva webhusaiti yavo.
Mhanya chirongwa chemutyairi chawakatora kurodha pasi, uye chiise icho.
Kana iri faira INF kana imwewo fomati, unogona kurudyi-kubaya kuCPU, wobva wagadzirisa mutyairi.
Ichakubvunza iwe kuti utore iyo INF faira, uye wozoiisa.
Muchiitiko chekuti mutyairi wako akatogadziridzwa kuchinyorwa chazvino, unogona kuedza kudzokera kune mutyairi wekare. Izvo zvinokwanisika chete kana iwe uine backup yemutyairi wako usati wagadziriswa kana iwe unogona kuwana imwe pane yeOEM webhusaiti.
2] Vhura GPU Scaling
Kana iwe uine yako AMD mifananidzo kadhi kana NVIDIA, ungangoda kuongorora GPU kuyera sarudzo. Inobvumira kuyera chifananidzo, saka inokodzera skrini zvese zviri zviviri uye zvakaringana, kureva, hapana miganhu dema.
Vhura yako AMD Radeon marongero
Dzvanya pane 'Ratidza'
Tsvaga GPU Kuyera ipapo uye ugokwanisa
Vhura NVIDIA Kudzora Panel. Heano iwe uine mbiri sarudzo:
a) Shandura Kugadzirisa kana Gadzira Nyowani Shanduro: Pano unogona kugadzira chisarudzo chekuratidzira chako, asi chengetedza chiyero chekuzorodza chakafanana.
Unogona kuongorora usati wapedza. Izvi zvinoshanda kana iwe uchiziva danho rekugadzirisa raivepo, asi gadziriso yekutarisa haina kunyorwa ikozvino.
b) Rongedza Desktop Yakakura: Unogona kusarudza pakati peKuzara Screen, Aspect Ratio, kana pasina kuyera. Kuganza kunogona kuva pane GPU mwero kana kungo tarisa. Heano zvishoma yambiro asi. Kunyange zvingave zvisingaratidze chero zviratidzo zvinooneka panguva yekushanda nguva dzose kusanganisira vhidhiyo yekutamba, iwe unogona kuona zvichionekwa kana uchiridza mutambo wevhidhiyo.
Kana dambudziko rako rikaganhurirwa kune chimwe chirongwa, ungangoda kuchipa mukana weGPU. Enda kuZvirongwa> Sisitimu> Ratidza> Graphics Zvirongwa.
Aya ndiwo chete mhinduro dzinogoneka dzataona kana Windows 10 haizoregi iwe uchinje resolution yekuratidzira kwako. Dzimwe nguva, iyo resolution inonamira pane yakaderera resolution, uye hapana nzira yekugadzirisa. Kana izvi zvikasagadzirisa dambudziko kwauri, ndingakurudzira chinhu chekupedzisira usati wadzosera Windows. Gadzira account nyowani, uye ona kana ichikushandira. Dzimwe nguva, maakaunzi anokuvadzwa, uye ma profiles haagadziriswe.
Tiudze kana paine chero eaya matipi akabatsira iwe.